Ekwu okwu banyere anọ bụ isi njikọ nke ziri ezi echichi nke n'èzí ikanam billboards
site ha na 20-12-07
Mpempe akwụkwọ mpụga n'èzí nwere uru nke nkwụsi ike dị mma, ike oriri dị ala, na oke ikuku radiation. Ha bụ ngwaahịa kachasị adaba maka mgbasa ozi n'èzí. Ihu ọma, nkịtị Ikanam ngosi meziri na-agụnye mgbasa ozi hụ na i meziri, ederede ákwà, graphic hụ na i meziri, wdg, nke al ...
Nsogbu nsogbu na nsogbu maka asambodo UL nke oriọna filament
N'oge na-adịbeghị anya, oriọna filament oriọna na-ewu ewu nke ukwuu, nwere ọkụ ọkụ 360 Celsius na-enwu ọkụ; agwakọta igwe eletrik dị elu iji bulie ike ike nke ike ọkọnọ ma belata ọnụ ahịa oriọna ahụ; elu-edu ìhè isi, agba nsụgharị index n'elu 90, egbuke egbuke arụmọrụ n'elu ...
Ikanam'S Development Na-adịbeghị anya Afọ
N'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, ịrị elu nke ọkụ ọkụ ọkụ emeela ka ọtụtụ ndị lebara anya na ọkụ ọkụ. N'etiti 1990s, Nakamura nke ụlọ ọrụ kemịkal Japan na ndị ọzọ gbara mbọ na-enweghị atụ iji mee ka ọkụ ọkụ na-acha anụnụ anụnụ ...